Bruno Fernandes oo difaacay kooxda Liverpool kahor kulanka weyn ee FA Cup-ka – Gool FM
(Manchester) 23 Jan 2021. Xiddiga Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa si cajiib ah u difaacay qaab ciyaareedka niyadjabka leh ay Liverpool sameysay dhawaan, wuxuuna carabka ku adkeeyay in Reds aysan soo bandhigin heerar xun.
Hadalka Bruno Fernandes ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka ay kooxaha Manchester United iyo Liverpool ku wada ciyaarayaan tartanka FA Cup habeen dambe ee Axada ah.
Burnley ayaa jabisay rikoorkii garoonka Anfield, kaddib markii ay saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Liverpool oo ay 0-1 kaga soo adkaatay ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League.
Haddaba ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku difaacay Liverpool wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in koox walba ay leedahay xilliyo kala duwan inta lagu jiro xilli ciyaareedka, mana u maleynayo inay si liidata u ciyaareyso, waxaan u maleynayaa inaysan guuleysan ​​maalmahaan tanina waa ujeedka.”
Sidoo kale Bruno Fernandes ayaa muujiyay taageerada uu u hayo seddexda weerar ee weerarka Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino, wuxuuna yiri
“Marka kooxdu aysan guuleysan, qof walba wuxuu ka hadlayaa xiddigo ay kamid yihiin Salah, Firmino iyo Sadio Mane, marka ciyaartooydu aysan gool dhalin, qof walba wuu ka hadlayaa taas.”